हिजो प्रचण्डकै वरिपरि घुम्नेहरु आज उनकै बदनामिमा किन रमाइरहेका छ्न ? - Janadesh Khabar
आरबी खड्का	काठमाडौं	भदौ ९, २०७७
हालका समकालीन नेताहरुमध्ये प्रचण्डमा जति दुरदर्शिता, सिर्जनासिलता, दृढता र जिम्मेवारीवोध अरु कसैमा देखिँदैन । सायद प्रचण्डमा यिनै गुण भएकाले होला, आजका प्रचण्ड चौतर्फी घेरावन्दी र आक्रमणमा छन् ।
उनीमाथि वुर्जुवा वर्ग त ज्यानै फालेर आक्रमणमा लागेको छ नै, साथमा हिजो जनयुद्धकालमा प्रचण्डका सारथी बनेकाहरुसमेत वुर्जुवाहरुकै स्वरमा स्वर मिलाइरहेका देखिन्छन् ।
आखिर प्रचण्डको जस्ले जति आलोचना गरे पनि नेपाली राजनीति प्रचण्ड कै वरिपरि घुमिरहेको स्पष्ट बुझ्न सक्किन्छ । एकथरी यस्तो मान्छेहरू पनि छन जस्ले प्रचण्डको कुरै नगरी लाग्छ उनिहरुलाइ खानै पच्दैन ।
हिजु प्रचण्डकै वरिपरी घुम्नेहरु समेत अहिले उनको वदनामीमा रमाइरहेका छन् । चौतर्फी आक्रमण र घेरामा परेका प्रचण्डलाई उनका सहयोगी भन्नेहरुले त्यहाँवाट निस्कन मद्दत गर्नेभन्दा दोषको भारी उनी एक्लैलाई देखाएर आफू पानीमाथिको ओभानो बन्न खोजिरहेका देखिन्छन् ।
यसरी प्रचण्डको बिनाश गर्नमा उनिहरु तल्लिन छ्न । यिनिहरुलाइ यो पनि थाहा छ, कि अहिलेको नेपालमा नेपाली राजनीतिमा प्रचण्ड बिनाको राजनीति भनेको नुन बिनाको तरकारी हो । फेरि पनि प्रचण्डकै आलोचना किन रु जस्ले मेहनत गर्छ उस्ले उपलब्धि हासिल आवस्य गर्छ तर यहाँ मेहनत त गरिन्छ उल्टो, प्राप्त उपलब्धि लाइ पनि गुमाउने खतरापूर्ण मेहनत, के यसरी हामी भोलिको नेपालको परिकल्पना गर्न सक्छौ र ?
यहाँ पार्टीलाई गुट उपगुटमा वदल्ने, कार्यकर्ता र जनताका बीचमा होइन नेतृत्वकै वरिपरी घुम्न रमाउने तथा पार्टी र आन्दोलन भाडमा जाओस् तर आफ्नो भलो हुनुपर्छ भन्नेहरुवाट प्रचण्ड सतर्क हुनै पर्छ । उनले विगतका गल्ती केलाएर त्यसवाट पाठ सिक्दै आफ्नो पंङ्तिभित्र विश्वास आर्जन गर्न सक्नै पर्छ । त्यसैले नेकपाको भविष्यमा कमरेड प्रचण्ड नेपाली जननेता बन्ने अवसर कदापि गुमाउन हुँदैन ।
नेपालमा कम्युनिष्ट एकता भएको नरुचाउनेहरु देशले समृद्धितर्फ यात्रा गरेको र देशमा राजीतिक स्थायित्व कायम भएको पचाउन नसक्नेहरु पनि छन ।
त्यसैले काँधमा काँध मिलाएर पार्टी एकताको स्प्रिड र जनभावना अनुरुप अघि बढ्नुको विकल्प नरहेको भन्दै नेकपा निकट भातृ संगठन अखिल भारत नेपाली एकता मंचका केन्द्रिय नेता २आरबी खड्का ले आफ्नो फेस्बुक वालमा प्रष्ट लेख्नु भएको छ ।
सभार स् आरबी खड्काको फेस्बुक वाल बाट
९ भदौ २०७७, मंगलवार १०:१४ बजे प्रकाशित
सुत्ने बेलम भो ? यी ८ चीजबाट सँधै टाढा रहनू
ओली भेट्न प्रचण्ड पुगे बालुवाटार